गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ता१५–२० हजार मान्छे मारेर जनयुद्ध गरेको यही अवस्थाका लागि हो ? : राजकुमार लेखी
Monday, 26 October 2015 09:41	Rate this item
संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा समेत तराई मधेसमा आन्दोलन जारी छ । नयाँ संविधानमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै थारु समुदाय र मधेसवादी केही दल आन्दोलनमै केन्द्रीत भइरहेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधानमा सबैका अधिकार समेटिएको दाबी गरिरहँदा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय नागरिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजकुमार लेखी त्यसको कडा प्रतिवाद गर्दैछन् । उनी आफ्ना अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म थारु समुदाय आन्दोलनबाट पछि हट्न नसक्ने बताउँछन् । उनी आफूहरुको आन्दोलन कतैबाट प्रायोजित नभएको दाबी गर्दै माग पुरा भए १० मिनेटभित्र आन्दोलनकारी थारु समुदाय आ–आफ्नो घर फर्किने बताउँछन् । संविधान जारी भइसकेपछि पनि मुलुकमा आन्दोलन जारी छ, संविधान बनेपछि पनि मुलुकले निकास पाएन, तपाईहरु आन्दोलन मै हुनुहुन्छ । यो क्रम कहिलेसम्म रहन्छ ?
पुष्पकमल दाहाल यस्तो व्यक्ति हो जसले १५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई मारेर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो र अहिले ती १५ हजार शहीदको भावनाविपरीत कुरा गरिरहनु भएको छ । उहाँकै जनयुद्धमा हजारौं थारुहरुले बलिदान दिएका छन्, सहादत प्राप्त गरेका छन् । उहाँ नै अहिले थारु विरोधी, मधेसी विरोधी कुरा गरिरहनु भएको छ । त्यसकारण एक दिनमा सयवटा झुट बोल्ने व्यक्तिको के कुरा गर्नु ? उहाँको कुरामा हामीलाई विश्वास छैन । उहाँले नै थरुहट स्वायत्त प्रदेश, लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश, मगरात स्वायत्त प्रदेशको ललिपप बाँडेको होइन ? हामीले त सुरुमा यस्ता कुरा गरेका थिएनौं । जनयुद्ध गर्ने बेलामा जे कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो, त्यो अहिले पुरा गर्नुभयो त ? १५–२० हजार मान्छे मारेर जनयुद्ध गरेको यही अवस्थाका लागि हो ? त्यसकारण रगतको होली खेलेर, मान्छे मारेर, जनताविरोधी कुरा गरेर देशमा शान्ति स्थापना हुन सक्दैन ।	Read 950 times	Tweet
« …नत्र मधेस नेपालबाट छुट्टिएर अलग देश बन्छ-राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी	वार्ता दिल्लीसँग होइन, हामीसँग गर्नुपर्छ : महन्थ ठाकुर »